Football Khabar » रियल मड्रिडको प्रि–सिजन खेल तालिका सार्वजनिक : कुन खेल कहिले ?
रियल मड्रिडको प्रि–सिजन खेल तालिका सार्वजनिक : कुन खेल कहिले ?
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले सिजन २०१९–२० सुरु हुनुअघि खेल्ने प्रि–सिजन टुरअन्तर्गतका सबै खेल तालिका टुंगो लागेको छ । रियलले फ्रेन्च कोच जिनेदिन जिदानको नेतृत्वमा आगामी सिजनलाई भव्य बनाउने गरी अनुबन्ध गरेका केही स्टार खेलाडीका साथ प्रि–सिजनको तयारी थालेको छ ।
जसमा रियलले नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि प्रि–सिजन टुरअन्तर्गत कूल ५ खेल खेल्दैछ । जसमा इंग्लिस क्लब टोटनह्यामदेखि लिग प्रतिस्पर्धी एथ्लेटिको मड्रिडसँग पनि उसले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका छ । रियलले पहिलो खेल जुलाई २१ तारिखमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखसँग खेल्नेछ भने अन्तिम खेल जुलाई ३१ मा आउदी कपमा बार्यन म्युनिखसँगै खेलनेछ ।
प्रकाशित मिति २१ असार २०७६, शनिबार १५:०८